VaMnangagwa Vowedzera neMavhiki Maviri Mazuva eKuti Vanhu Vagare Mudzimba Kurwisa Coronavirus
Kubvumbi 19, 2020
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vainge vawedzera nemamwe mavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kusvika musi wa 3 Chivabvu. Izvi zvinotevera kusvika kumagumo kwemavhiki matatu avainge vambotara kuti vanhu vagare mudzimba ayo ange achifanira kupera nhasi.
Vachitaura kunyika kuState House, mumashoko apihwa Studio 7 mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaMnangagwa vakati zviri pachena kuti mumavhiki matatu avainge vambotara huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hutori kuwedzera.
Vakati Zimbabwe haisatiwo yazadzikisa zvose zvinoda kunzi zviitwe neWorld Health Organization kuti vanhu vanzi vabude mudzimba.
Bazi rezvehutano razivisa kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwawedzera kusvika pamakumi maviri nemashanu mushure mekunge mumwe mudzimai abatwa nechirwere ichi kuManicaland. Mudzimai uyu ainge adzoka munyika kubva kuFrance.
Asi pane vanhu vaviri vapona kusvika parizvino. Vanhu vatatu ndivo vafa nechirwere ichi. Asi vati vemakambani emigodhi vanofanira kutanga basa mushure mekunge vashandi vose vavhenekwa. Vatiwo vemakambani akakosha vanokwanisawo kuita basa.
VaMnangagwa vati bazi rezvemagariro evanhu richabatsira vamwe vave kunonga svosve nemuromo parizvino nenyaya yenzara. Vanhu vakawanda vari kuudza Studio 7 kuti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centres for Disease Control Prevention anoti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave kudarika churu chimwe chete nemakumi masere Vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nechimwe.
Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checornavirus pasi rose inoti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus hwadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana. Vanhu vafa vave kudarika churu zana nemakumi matanhatu.
America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru zvina